Iitemplate zeKhadi leKrisimesi esemgangathweni ezintlanu Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | itemplates, Ikhathuni vector
La IKrisimesi sele ikufutshane kwaye sele simisela imithi yeKrisimesi, Ukulungiselela izipho kunye nokuyila uluhlu lokuthenga ukuze ngeKhisimusi kungabikho nto ilahlekileyo etafileni. Usuku olukhethekileyo apho sizama ukuqokelela lonke usapho kwaye sonwabe.
Ukusuka kwicala lethu sibeka ingqolowa encinci yesanti kwaye yile Iitemplate ezintlanu zekhadi leholide ikhululekile ngokupheleleyo. Ungavuyisana nabo ubathandayo ngeKrisimesi kunye nabo usebenza nabo.
1 Iibhola zeKrisimesi zesilivere
2 Ixhama leKrisimesi
3 Amakhekhe ekhephu eKrisimesi
4 Isileyi kaSanta
5 Umthi weKrisimesi weRetro
Iibhola zeKrisimesi zesilivere
Ukusuka eVecteezy sine itemplate yebhola yesilivere yebhola enkulu yesilivere kunye nomgangatho. Ikhadi leKrisimesi elihle kakhulu lelo abahlobo bakho okanye abafowunelwa abaya kulifumana xa usenza ngokwezifiso kwi-Photoshop.
I-reindeer enye zezona zilwanyana zingumfuziselo leeholide zeKrisimesi. Eli khadi liyibeka kwindawo ekhethekileyo ukuze ukwazi ukuyikhuphela uyisebenzise ngokwakho. Unayo zombini kwi-Ai, EPS, PDF kunye neJPG ukuze ukwazi ukwenza uhlengahlengiso oluhambelanayo.
Amakhekhe ekhephu eKrisimesi
Kwakhona ukusuka eVecteezy sinenye itemplate efanelekileyo yokuhombisa ikhadi leKrisimesi. Unayo ifumaneka kwifomathi yevektha, ke unokwenza nje into oyifunayo ngale template.
Isilenda kaSanta lelinye ikhadi elisemgangathweni elinalo iithoni eziluhlaza eziza kufumana uncumo yelo lungu losapho okanye umhlobo olifumanayo ngezi ntsuku zikhethekileyo. Enye ivelator esemgangathweni yeKrisimesi efana nayo ezo zeli nqaku.
Umthi weKrisimesi weRetro
Kulabo bathanda le nto Umthi weKrisimesi onemilo egobileyo kwaye iyazikhwebula kuzo zonke ezi zinto zingasentla. Ngethoni enesidima kunye namahlwantsi ekhephu angamacandelo amhlophe kuphela, ikhadi elikhethekileyo leKrisimesi elahlukileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ikhathuni vector » Iitemplate ezintlanu zamakhadi eKrisimesi asimahla
Amakhonkco akusa kwiphepha lokukhuphela!